China Otu Organothiophosphate Ahụ Inmụ ahụhụ Azamethiphos na-emepụta na ndị na - eweta ngwaahịa | Senton
An Organothiophosphate Ahụhụ Azamethiphos
Aha ngwaahịaAm Azamethiphos
CAS Mba.: 35575-96-3
Product aha: Azamethiphos
Nkwakọ ngwaahịa: 25KG / Drum, 100G/Akpa ma ọ bụ dị ka Custimised chọrọ
Arụpụta: 50tons / afọ
Akwụkwọ: ISO 9001: 2015, GMP.
HS Usoro: 29349990.21, 38089190.00
Azamethiphos bụ organothiophosphate Ahụhụ. Ọ bụAnụmanụ eji ogwu azu na azu salmon azu ugbo iji chịkwaa nje, nnụnnụ ụlọ, ijiji mmekpa ahụ na ụmụ ahụhụ na-akpụ akpụ na ọrụ anụ ụlọ: ụlọ obibi, ebe mmiri ara ehi, ụlọ ezinaụlọ, ụlọ ọkụkọ, wdg Anyị emepela nke anyị Azamethiphosngwaahịa, Azamethiphos 95% Tech, Azamethiphos 50% WP, Azamethiphos 10% WP na Azamethiphos 1% GB. Azamethiphos dị ka ihe na-enweghị ntụ ntụ na-acha ntụ ntụ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ dị ka oroma odo odo.
Akwụkwọ ICAMA, Asambodo GMP niile dị.
Ogo nkwa na ọnụahịa kacha mma
Qualitydị mma kacha mma dị ka Okenye maka Ofufe Control.
Inye ezi uche na asọmpi asọmpi dị ka ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ụwa maka ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe anyị na-arụ ọrụ ngwaahịa a, ụlọ ọrụ anyị ka na-arụ ọrụ na ngwaahịa ndị ọzọ, dị ka anwụnta Nnukwu, ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, Medical Chemical Intermediates, ụmụ ahụhụ na-egbu egbu, Ahụhụ gba na HEBEI SENTON bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mba ụwa na Shijiazhuang, China. Isi azụmahịa gụnyere Agrochemicals,API& Intermediates na Basic Chemicals. Elydabere na ogologo oge na onye òtù ọlụlụ na ndị otu anyị, anyị gbalịsiri ike ịnye ngwaahịa kachasị mma na ọrụ kacha mma iji gboo mkpa ndị ahịa.
Na-achọ ezigbo ọgwụgwọ ọgwụ anụmanụ Azamethiphos Manufacturer & supplier? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All Colorless to Gray Crystalline Powder na-ekwe nkwa dị mma. Anyị bụ ndị China si Factory nke Crawling ahụhụ na anụ ụlọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Ọdịdị dị elu nke Ahụhụ Meperfluthrin
Osote: Nnukwu ụdịdị dị iche iche Kpọtụrụ Fungicide Iprodione
Azamethiphos nke Organophosphorus Pesticide
Ọnụ Tetramethrin Permethrin na-egbu semụ ahụhụ
Enramycin nwere mmetụta siri ike
Benzoic acid dị n'etiti ọgwụ